Ny Fiainantsika sy ny Fanompoana VJ: Fandaharana 16-22 Jolay 2018
Hira 100 sy Vavaka
“Fanoharana Momba An’ilay Samaritanina Tsara Fanahy”: (10 min.)
Lk 10:29-32: Samy tsy namonjy an’ilay lehilahy jiosy notafihin’ny jiolahy na ilay mpisorona na ilay Levita [Alefaso ilay video hoe “Lalana avy any Jerosalema Mankany Jeriko” eo amin’ny Lk 10:30, nwtsty.] (w02 1/9 16 § 14-15)
Lk 10:33-35: Tena be fitiavana ilay Samaritanina matoa nanampy an’ilay lehilahy notafihin’ny jiolahy (“ny Samaritanina anankiray”, “nofeheziny ny ratrany sady nasiany menaka sy divay”, “tranombahiny” fanazavana Lk 10:33, 34, nwtsty)
Lk 10:36, 37: Ny olon-drehetra mihitsy no tokony ho tiantsika fa tsy izay mitovy saranga, na fiaviana, na foko amintsika ihany (w98 1/7 31 § 2)
Lk 10:18: Inona no tian’i Jesosy holazaina, rehefa niteny tamin’ireo mpianatra 70 lahy izy hoe: “Hitako fa efa nazera toy ny tselatra avy any an-danitra i Satana”? (“Hitako fa efa nazera toy ny tselatra avy any an-danitra i Satana” fanazavana Lk 10:18, nwtsty; w08 15/3 31 § 12)
Lk 11:5-9: Araka io fanoharana io, inona koa no tokony hataontsika rehefa mivavaka? (“Mba ampisambory mofo telo aho, ry sakaiza”, “Aza helingelenina intsony aho”, “fikirizany sy ny fahasahiany” fanazavana Lk 11:5-9, nwtsty)
Famakiana Baiboly: (4 min. na latsaka) Lk 10:1-16
Fitoriana: (2 min. na latsaka) Vao manomboka miresaka an’ilay hevitra azo resahina ianao dia manohitra ilay olona. Fanoherana fahita eny amin’ny faritaninareo ilay izy.
Fiverenana Mitsidika Voalohany: (3 min. na latsaka) Vao manomboka miresaka an’ilay hevitra azo resahina ianao dia manapaka ny teninao ilay olona. Mbola misakafo, hono, izy.
“Nahoana no Tena Zava-dehibe Ilay hoe Tsy Momba ny Atsy na ny Aroa? (Mi 4:2)”: (15 min.) Alefaso ilay video ary iaraho midinika.
Fianarana Baiboly: (30 min.) jy toko 29
Ny Fiainantsika Kristianina sy ny Fanompoana: Fandaharana ho An’ny 16-22 Jolay 2018